Maamulka Idaacada Baraadir oo Cudurdaar iyo Magdhaw weydiistey DKM
Maamulka idaacada banaadir Waxa uu si weyn uga xunyahay tacadiyada ba’an ee loo geysto suxufiyiinta soomaaliyeed oo ay ugu dambeeyeen, tacdigii lagula kacay wariyaasha idaacada Banaadir C/raxmaan Maxamed Xasan (Xudeyfi) iyo Xuseen Geedi Geedi (Xaynuuf) iyo Shafic Macalin Fariid oo weriye madax-banaan ah.
Hadaba maamulka idaacada Banadir waxa uu halkan ka cadeynayaa in aysan xal u aheyn oo kaliya sii deynta weriyayaasha oo laga sii daayay xabsiga C.I.D-da oo ay ku xernaayeen mudo 48-saacadood ah.
Maamulka idaacada banaadir waxa uu halkan ka qirayaa in wariyayaashooda logula kacay xad gudub dhan ka ah bani’aanimada; iyagoo ay u dheer tahay xuriyad ka qaadida loo geystay, aflagaado iyo jirdil.
Hadaba maamulka idaacada banaadir oo si weyn uga xanuunsanaya arintaasi ayaa waxuu beesha caalamka, ururada caalamiga ah ee kala duwan ee ay ugu horeyso urur goboleedka Igad iyo dhamaan ururada u dooda xuquuqul insaanka ka codsaneysaa inay gacan ka geystaan sidii kooxda TNG-da ay uga bixin lahaayeen cudur daar lagu qanci karo isla mar ahaantaana ay u bixin lahaayeen magdhaw.
Maamulka Idaacada Banaadir waxa uu ugu mahadcaalinayaa dhamaan intii ka qey-qaadatey xuriyad u soo celinta weriyeyaashii lagu tacadiyey. Iyo dhamaan dadweynaha Soomaliyeed ee ka xanuunsaday xadgudubkaas.
Axmed Cali dhegweyn (axmedna)
Maamulka idaacada banaadir
Afeef: Aragtida qoraalkaan waxaa leh idaacada banaadir, Muqdisho.